BENCHMARK SIMS Falcon BMS 4.33 sano 3 3 bilood ka hor #412
Waxaad si fiican markaas aan ka heli kartaa sida dhibic macquul ah view this mas Galaydhka F-16 siinayaa doonaa.
APPROAVED ka wadayaasha mas Galaydhka F-16 Jockey ka Cirka ee ay u noqon sidii macquul ah sida ay noqon kartaa in ka
Mas dhab ah kursiga adduunka.
Alote buugagan reading loo baahan doonaa inuu u duulo mas BMS ee F-16 in la fahmo nidaamka oo dhan ,, si loo talin!
Waxanu waa waxa dhabta ah ,, ma ahan oo keliya ciyaar ,, sidaa darteed haddii aad u bixiyey iyada aawadeed ,, halkaas waxaad arki kor Gentelmen!
Mas Falcon F-16 BMS 4.33
KU SOO DHAWAADA xaquuqda Sims
BMS 4.33 Trailer muuqan badan oo ka mid ah qaababka cusub 4.33.
Falcon BMS 4.33U3 - rakib inay la dagaalamayaan Ready in Saacadaha 1.67 (Tutorial)
video Tani waxaa loogu tala galay in aan dhamaadka oo dhan u noqon oo dhan u noqon, laakiin video aasaasiga ah sharxaya aqlabiyad ah hawlaha la xidhiidha Falcon BMS oo aad diyaar u tahay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay ee Falcon BMS hesho.
Falcon BMS 4.32 - rakib inay la dagaalamayaan Ready in 1 Saacadda (Tutorial)
Tani waa tutorial ah oo si dhakhso video in idin barayaa wax walba oo aad u baahan tahay in la ogaado si aad u bilowdo la Falcon BMS 4.32. qaybaha kala duwan tutorial waa waqti hoose haddii aad u baahan tahay in si deg deg ah tixraaca qaybta gaar ah ku tuntay.
BENCHMARK SIMS Falcon BMS 4.33 sano 3 3 bilood ka hor #420
Waayo, kuwa idinka mid ah saraakiisha cusub in aad u jecel yihiin in ay sameeyaan saarnaa mas F-16 Galaydhka siinin ogaado
halkaas oo si aad u bilowdo ,, halkan waa wax aad u qaniini on ama heshiiska kirada si ay u eegaan.
fursaddan u qaado sida dalab si ay u noqdaan mid ka mid ah sarkaal pilot Cirka ee Fighter (Virtual) in ay complet & acheived
fasalkooda tababarka F-16 natiijooyinka guuleysan & in ay baraan & tababar la qaato qaar ka mid ah kuwa ugu weyn duusha mas maanta.
Halkaas ayaad ka arki kartaa Lixaad, ,, Gentellmen!
Waa maxay Academy Tababarka Falcon Lounge ah?
Tani "academy" ayaa lagu aasaasay By MaxWaldorf iyo Ripper. Fikradda waa mid fudud: adigoo koox ka mid ah Falcon BMS xaqiijiyay duuliye si ay u caawiyaan kagama iyo duuliyayaasha cusub oo raadinaya wanaagsan fahamka F-16.
macallimiinta waxay leeyihiin oo kaliya on ujeedada, waxaad ka caawiyay in hanashada-ka F 16 (F16C Block 50 ama 52 inta badan).
doorka baruhu waa xadidan in kastoo:
Macallimiinta kaa caawin doona inaad ansixiyo aqoontaada.
Waxaa lagu weydiin doonaa inaad dib u eegto / tababar iyo casharo ka hor jadwalka tababarka ...
Hadda waxaad la fahmo waxyaabaha aasaasiga ah ee naga tababarka Falcon BMS, ha aad na siiso faahfaahin dheeraad ah.
Waxaan ahay barasho oo aad rabto caawimo Baraha ah?
Sidee ayaan u qori karaa?
Barashada Falcon BMS ma fududa waxay u baahan tahay badan oo furitaankii inay ku guuleystaan ​​shaqada. Sida iska cad waxaa jira qaar ka mid ah pre-loogau ardayga waa in la waafajiyaa ka hor diiwaan gelinta:
Ardayga waa in uu leeyahay a HOTAS + TrackIR (ama qalab u dhigma)
Falcon BMS (version deggan ee la soo dhaafay) waa in lagu dhejiyaa oo si buuxda u qaybiyay
Diiwaangeli account ah on website this
Dhaji warqad dhiirogelin barnaamijka ardayga qaybta Forum ka go'an
Your profile loo eegi doonaa kooxda our Shaqaalaha iyo go'aan la xiriiray doonaa in aad. Sida aan waa tiro kooban oo macallimiinta, uma qaadan karno in ka badan ardayda laba per macallimiinta ah, si meelaha ay yar yihiin ...
PS: shuruudaha waa kuwa u "Academy" ma aha "Falcon Lounge" bulshada
Maxaa laga codsaday doonaa ardayga?
Waxaa jira qaar ka mid ah ballan aan ka ardaydeena weydii:
jadwalka tababarka Ixtiraam
Go'aanka Macallinka Ixtiraamka (haddii aan si kale cadeeyay)
Shaqo ka baxsan casharada in milmi iyo diyaariyo casharka soo socda.
Noqo a macallin Falcon Lounge naftaada ka dib markii aad soo baxday ...
Asal ahaan, bulshada keliya shaqeyn karaan hadii wakhtiga aanu ku qaataan kula soo celin siin doonaa ka kagama kale oo cusub. Waxaan si cad ha idin waydiisan maayo inaad samaatid, laakiin in la eego la tababarka aad qaaday, waxaa wax idin bari kartaa in kagama cusub ayaa noqon doona.
go'antahay Tani ee la soo dhaafay (N ° 4) waa furaha, bulshada tani ma shaqayn karo iyada oo aan ...
Qaado in ay tixgeliyaan ka hor inta aanad codsan!
Maxaan ka baran doontaa?
Waa hagaag, si daacad, annagu kala ma dabooli doontaa dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha Falcon Pilot ah laakiin aan tixgelin doonna in aad ka baran doonaa ku filan oo ay ku noqon shaqada hufan ...
Hubi our Falcon BMS "dugsiga tababarka barnaamijka" page oo aad arki doonaa content ee cashar kasta oo.
cashar kasta on website this ka koobnaan doonaan talabixin ah in aad ka danbeeya si ay u diyaariyaan aragtida ah.
Xusuusnow: Waxaan halkaan u joognaa si loo ansixiyo aqoontaada iyo waxa dhammaystira, laakiin haddii ay jirto innaba shuqul ka kooxda, aad meel fog ma heli doono ...
Dhamaadka cashar kasta, macalinka dhejin doonaa Xilakiii a on forums ah inuu ku siiyo raadraaca ka mid ah horumarka, liito iyo.
Maxaa ka dhigay aan macallin sharci ah inay i baraan?
Well daacad ah, waxba ... Waxaan u baahan ka macallimiinta si aan u dhex mari iyo aqoonsiga aannu tababar si ay u fahmaan qaabka iyo shuruud ka dambeeya casharada iyo koorsooyin.
Waxa kaliya ee aan sheegi karo ayaa ah in macallin wax ka siin doonaa waqti uu ku gaarka ah si ay adiga iyo for free caawiyo !!! Just for in, in ayaaba ku filan!
Xasuuso, tani waa Qabille oo a iyo kacsi xaaraan ah. Waxaan ma ka dhigi doonaa duuliye dagaal dhab ah kaa soo ... (haddii aan samayn, markaas fadlan marti noogu soo duuli kula !!!)
Waxaan qabaa inaan leeyihiin xirfadaha, sidee ayaan u noqday Macallin ah?
Waa hagaag, in fududahay! la xiriir MaxWaldorf ama Ripper dhex channel muran iyo qiimeyn doonaa haddii aad la socon ruux tababarka.
Haddii aad hore u baxay xagga School Flight markaas Shaqaalaha ee idin siin doonaa awood u leeyahay inuu baro koorsooyinka qaarkood (iyadoo ku xiran heerka).
Qaar ka mid ah u malaynayo in uu yahay xulashada adag laakiin waxaan rabnaa in aan by our sumcad taagan iyo bixiyaan tayada dadka, waxaan ku weydiin doonaa isku mid ah dadka noo soo biiray!
Sidaas daraaddeed, haddii aad u malaynayso in aad xiiseyneyso, markaas ka hor tago! Waxaad tahay oo kaliya hal talaabo ka adduunka oo xiiso leh iyo saaxiibtinimo iska!
Haddaba haddii aad u malaynayso in aad qabto waxa ay qaadataa waayo, Ayuub ugu ,,
Raac link hoose iyo saarnaa & soo dhaweyn Gentelmen Nasiib wanaagsan!
Ku soo dhawow Lounge Falcon ah!
Daawade Gacaliye, Welcome to "The Falcon Lounge"! Our bulshada ku salaysan yahay Falcon BMS simulator.You awoodaan in ay la sheekaysatid dadka kale ee ka soo adduunka oo dhan, ogaan jahooyinka cusub, bartaan waxyaabo cusub (iyada oo loo marayo Academy ama ma) iyo ugu muhiimsan ay noqon doontaa: raaxaysan duulaya ku-F 16 Fadlan ku soo biir na hadda iyo waqti qaar ka mid ah oo wanaagsan la pilots.Hope kale dalwaddii ku qaataan inay ku arkaan ugu dhaqsaha badan oo ku saabsan website ama our channel muran ...